Iphupha ngesithunzi ▷ Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha lesithunzi. Amaphupha abonisa izinto ezisikhathazayo, kodwa zinokusinika ulwazi olubalulekileyo. Kule nqaku uyakufumana intsingiselo yengqondo kunye / okanye yokomoya yamaphupha.
Isithunzi kunye nobumnyama kunokubangela ukuziva ungakhululekanga kuthi sobabini xa ulele kunye nobomi. Ngokukodwa xa uqaphela isithunzi esimnyama, njenge-silhouette. Ngokukhawuleza sizibuza ukuba ngubani ofihle emthunzini. Ngaba isithunzi esibi? Okanye ngaba sisithunzi nje sethu njengeqabane lethu elihlala lihleli? Iphupha elihle elingenabungozi ngokukhawuleza lijika libe liphupha lokwenyani.
Si ilanga sikhanya ngamandla, isithunzi sibonakala ngathi siyinto entle, kuba ke siyasikhusela kwaye siyayiphumza. Ngokufanayo, isithunzi ephupheni sinokuziva ngokuqinisekileyo okanye ngokungalunganga. Ke ngoko, zonke ezinye iimeko ezihamba nazo zibalulekile ekuchazeni iphupha. Ke ngoko, faka iinkcukacha ezininzi ukufumana intsingiselo "echanekileyo".
Abantu abaninzi babona iimilo ezimnyama kunye nezithunzi emaphupheni abo. Kuqala singathanda ukukwazisa awona maphupha abalulekileyo ngomfanekiso onjengephupha wesithunzi:
1 Isimboli yephupha «isithunzi» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Ukuhlaselwa sisithunzi, iphupha elibi!
1.2 Indoda e-Shadow: Ifuna ntoni iphupha kum?
1.3 Isithunzi esibi kwihlabathi lamaphupha.
1.4 Isithunzi esimnyama ebhedini, liphupha elothusayo
1.5 I-Shadow Demon: utyelelo oloyikisayo kwihlabathi lamaphupha
2 Uphawu lwephupha «isithunzi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «isithunzi» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «isithunzi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «isithunzi» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Ukuhlaselwa sisithunzi, iphupha elibi!
Amaphupha apho uleqwa ngumntu omnye okanye nangaphezulu emthunzini ayoyikisa kakhulu. Amava anjalo ephupha anokubonisa ukuba umntu uzama ukubaleka kwimeko ethile okanye ukuziva ebomini bakhe. Ukongeza, inokuba sisazela sakho esibi okanye umba wobuntu bakho lowo uphuphayo angafuni kujongana nawo.
Indoda e-Shadow: Ifuna ntoni iphupha kum?
Ukuba uphupha umntu oyisithunzi okanye umntu omnyama onembonakalo yomntu, oku kunokuba luphawu lokujongana kwangaphakathi nezinto ezithile kubuntu bakho. Indlela iphupha elijongana ngayo nesithunzi somntu kufuneka ibandakanywe kuhlalutyo lwamaphupha:
Ukuba impendulo inoloyiko, ukuthandabuza kunye noloyiko, umntu akasamkeli isimilo kuye ngelixa evukile okanye esoyika ukuqonda eyakhe iminqweno okanye iminqweno. Ukuba ukuphendula kwamaphupha kumntu onesithunzi kulungile ngokwaneleyo, kuvavanyo olusebenzayo lwenxalenye yobuntu sele iqalile.
Isithunzi esibi kwihlabathi lamaphupha.
Nabani na ophupha umntu onesithunzi kwaye azi ngoko nangoko ukuba umbi okanye uneenjongo ezimbi, ngokungazi uthelekiswa nobume bakhe okanye iimpawu ezingathandekiyo. Asizithandi zonke iimpawu esizibonisayo kwabanye abantu kuthi. Umona, umona okanye ukubawa yimizekelo nje embalwa yezo mpawu. Zama ukumodareyitha ezi mpawu.
Isithunzi esimnyama ebhedini, liphupha elothusayo
Isithunzi esimnyama esimi ecaleni kwebhedi kwaye sibukele iphupha- leyo yimeko yephupha enokuthi yoyike abantu abaninzi. Umbala omnyama ungabonisa izinto ezahlukeneyo kulo mxholo: unokuthi ubonakalise iimpawu zomntu omnyama, azicinezelayo ebomini bakhe, okanye, xa ujongwa ngokuqinisekileyo, ufuzisela ubukrelekrele.
Isithunzi esimnyama, apho ungabona khona iphupha usembhedeni wakho, sinokumela iingxaki ebomini bakho, apho ungasenakuzimela khona.
I-Shadow Demon: utyelelo oloyikisayo kwihlabathi lamaphupha
Ngaba ubone idemon yesithunzi ngelixa ulele? Ke eli phupha linokubonisa ukuba ukhathazwa kukuthandabuza kunye nengxabano yangaphakathi kubomi bakho bemihla ngemihla. Idemon emnyama inokuthi ibonakalise uloyiko olucinezelweyo okanye iimvakalelo zokungazenzi zetyala. Ukuba i-monster yesithunzi ifana usathana kwaye uthe phithi yiyo, oku kungabonisa ukuba uziva ungenamandla kwaye unesidingo sokuthatha indawo enkulu yamandla ebomini bakho.
Uphawu lwephupha «isithunzi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lwamaphupha ngokubanzi, isimboli yamaphupha "isithunzi" imele inani elibalulekileyo.
Kwisithunzi njengentsingiselo yephupha, oko kuthetha ukuba amacebo ephupha aquka yonke into iphupha elingayithandiyo ngokwayo. Kwi el mundo, umntu ophuphayo uyazicinezela okanye azicinezele ezi mpawu kuba azihambelani nomfanekiso wakhe. Ephupheni, nangona kunjalo, ukuqonda kwakho kucinyiwe kwaye ufumana ezi mpawu zibonakaliswe njengokuqikelela komnye umntu ngokusebenzisa i-subconscious yakho. Ke ngoko, indoda yesithunzi ihlala iziphatha ephupheni ngokuchasene nephupha ngokwalo.
Iphupha lesithunzi linokumela kwakhona isilumkiso. Ukuphupha kufuneka kucace imeko engacacanga ngokukhawuleza ebomini. Isithunzi sezinto ephupheni sibonisa uloyiko lwamaphupha, olubangelwa ziingozi ezicingelwayo.
Ukuba iphupha limnyama, nangona ebenokukhetha ukuba sekukhanyeni, kungekudala uza kukwazi ukulinda ukucaciswa kwento ethandabuzekayo ebomini. Umbono wesithunzi somntu okanye isilhouette njengophawu lwephupha ngokubanzi lubonisa iintlungu.
Ukubona isithunzi phambi kwakho njengolwandlalo kunokuqondwa njenge phuhliso ebomini babo. Nangona kunjalo, ukuba isithunzi sephupha siwela ngasemva komphuphi, ubomi bakhe buphazanyiswa ziimvakalelo zakudala zetyala kunye noloyiko.
Uphawu lwephupha «isithunzi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha "lesithunzi" kuninzi kakhulu. Uninzi lwexesha, isithunzi sinokuba sincinci ephupheni ebonisa eyakho ukuzithemba. Kodwa inokucacisa iinkqubo ezingekho zingqondweni. Ezi zinto kufuneka zenziwe ukuba zazi kwaye zilungiswe ngokukhawuleza kangangoko ebomini. Ezi nkqubo zingabikho zingqondweni ikakhulu iinkumbulo bacinezelwe okanye bazive benetyala kwaye benoloyiko.
Ukubona kwesithunzi kuhlala kubonisa ngokwengqondo ukuba awuhambelani nobomi bakho. Uswele isibindi kwaye uvumele uloyiko lwakho lulawuleke kakhulu.
Isithunzi ngokwaso ephupheni sibonisa amaxhala kunye neengxaki. Ukuba umphuphi uhlala kwizithunzi ephupheni lakhe, kufuneka aqonde ukuba ukhuselwe okanye uphenjelelwe ngamandla ngabanye abantu ebomini bakhe. Umdlalo wezithunzi njengomqondiso wephupha uhambelana nokutolikwa kwengqondo uphawu lwe isilumkiso Phambi kwamayelenqe namaqhinga abanye.
Uphawu lwephupha «isithunzi» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, kubonisa ukuba sele uza kusombulula ingxaki engacacanga.